Maxaad u dooranaysaa shirkaddaada?
Marka hore waa dadka.Waxaan nahay koox aad xirfad u leh iyo koox injineero khibrad u leh warshadahan.Maamulahayagu waxa uu shahaadadiisa ku qaatay UK taas oo shirkaddan u keenta aragti caalami ah marka loo eego kuwa kale ee soo saara munaaradaha.Marka labaad waa adeeg, alaabtan, soo saaraha iyo macaamiishu waxay u baahan yihiin inay ka hadlaan faahfaahin farsamo oo badan.Had iyo jeer waanu samiraynaa inaanu waydiino su'aal kasta oo aanu siino taladayada xirfadeed macaamiisha.Ugu dambeyntii, laakiin ugu yaraan, aad ayaan u qiimeynaa tayada.Shuruudo kasta oo macaamiisha ah waa la buuxin doonaa waxaana naga go'an inaan siino alaab tayo leh dhammaan macaamiisheena.
Immisa ayuu yahay munaaraddu?
Qiimuhu wuxuu ku xiran yahay nooca munaaradaha aad u baahan tahay.Noocyada kala duwan ee munaaradda, alaabta ceeriin ayaa laga yaabaa inay ka duwanaato iyo shaqada samaynta ee noocyada qaar ka mid ah ayaa laga yaabaa inay ka adag tahay kuwa kale.Tani waa sababta aan ugu baahanahay inaan aragno sawir-qaadista macaamiisha ka dibna sii xigasho.
Ka warran haddaanan haysan wax sawir ah?
Haddii macaamiishu aysan haysan sawir, waxaan bixin karnaa noocyo badan oo munaarad ah oo loogu talagalay macaamiisha inay doortaan.Xaaladaha intooda badan, waxaan bixin karnaa sawirka munaaradda saxda ah si loo buuxiyo shuruudaha macaamiisha.Haddii khadka gudbintu uu adag yahay, waxaan weli siinaa adeegga naqshadeynta macaamiishayada.
waa maxay amarka ugu yar?
Ma hayno amarka ugu yar waxaanan aqbalnaa dalab kasta oo ka yimaada macaamiisha.
Intee in le'eg ayaa wax soo saarku?
Sida caadiga ah waxaan samayn karnaa shixnad ugu horreysa hal bil gudaheed.Waqtiga wax-soo-saarka runtii wuxuu ku xiran yahay inta munaaradaha aad u baahan tahay.
Intee in le'eg ayay tahay maalinta rarida?
Waqtiga gaarsiinta Yurub, Afrika iyo qaarada Ameerika waa ku dhawaad ​​​​40 maalmood.Gobolada ASEN, wakhtiga dhalmada waa ku dhawaad ​​30 maalmood.Guud ahaan, wakhtiga dhalmada ayaa ka badnaan doona hal bil.
macmiilku ma baari karaa alaabtiisa ka hor inta aan la rarin?
Haa dabcan.Macmiilku waxa uu baari karaa alaabtooda wakhti kasta oo ay rabaan.Runtii, aad baanu u soo dhawaynaynaa macaamiisha inay soo booqdaan warshadeena oo ay kormeeraan alaabtooda ka hor inta aan la rarin.Waxaan siin doonaa 3 macmiil 3 maalmood hoy.Maamulka ayaa kulan la yeelan doona macaamiisha na soo booqda.Kormeer kasta oo alaabta uu u baahan yahay macmiilku waa la qaadi doonaa.
Waa maxay siyaasaddaada iibka kadib?
Guud ahaan, waxaan bixin doonaa adeeg kasta oo aan awoodno si aan u caawino macaamiisha ilaa munaaradaha si sax ah la isugu keeno.
waa maxay muddada lacag bixinta?
Caadi ahaan waxaan aqbalnaa T/T iyo L/C, 30% ka hor.